Basanta Basnet: राजेन्द्र खगेन्द्रको खेलौना–जुहारी
— खगेन्द्र संग्रौला
टारेर नटारिने त्रू्कर नियतिसित सम्झौता गर्दै एकरत्ती पश्चात्ताप नगरी निस्पृह भावले म स्वीकार गर्छु— म एक मृत लेखक हु“। लेखनमा जिउदो छदा वा जिउदो छु भन्ने व्यर्थको अभिनय गरिरह“दा मेरो सादा नाम खगेन्द्र संग्रौला थियो। त्यो अब मृत खगेन्द्र संग्रौला भयो। मेरो मृत्यु र रोला“ बार्थका दृष्टिमा लेखकको मृत्युमा ठूलो अन्तर छ। बार्थको लेखक रचना टुङ्गिएपछि मर्छ। र, त्यो मृत लेखक आफ्नो रचनाको व्याख्या र प्रतिरक्षा गर्ने हक र हुतीबाट च्यूत हुन्छ। रचनाको नियतिको निर्धारण पाठकले गर्छ, मृत लेखक केवल मूक दर्शक बन्छ। तथापि रोला“ बार्थ दयालु छन्। उनी लेखकलाई किस्ताकिस्ता गरेर मर्ने छूट दिन्छन्। एउटा रचनामा मृतक भएको लेखक अर्को रचना गर्न जीवितै रहन्छ। तर मेरो मृत्यु आंशिक होइन। यो थोक मृत्यु हो, यो समग्र मृत्यु हो, यो अन्तिम मृत्यु हो। म मृतकबाट अब केही पनि लेखिने छैन। कदाचित् लेखियो नै भने पनि त्यो स्वर्गीय स्वप्निल स्मृतिको जस्तै स्वर्गीय विप्निल विस्मृतिको नाममा लेखिने छ।
नया“को जन्म र पुरानोको मृत्यु सततः परिवर्तनशील जगत्को अकाट्य नियम हो। पुरानो मरेर आफूले ओघटेको ठाउ“बाट नपन्छिई नया“लाई उभिने ठाउ“ हु“दैन। नया“ र झर्झराउ“दो लेखकले जन्म लियो, म पुरानो र रुग्ण लेखकलाई मार्‍यो र खाली ठाउ“मा ऊ सगर्व विराजमान भयो। यो कालातीत सनातनको विस्थापन र कालजयी नूतनको स्थापना हो। ऊ विजयोत्सवको दुन्दुभी बजाउ“दै अस्तित्वमा आयो र शंखको एकोहोरो टु“स“गै उसले मलाई अनस्तित्वतिर चलान गर्‍यो। आखिर जीवन भन्नु नै आउनु र जानुको अनन्त कथा न हो।
ऊ जन्मिनुअघि नै मलाई कसोकसो आफ्नो मृत्युको पूर्वाभाष भइसकेको थियो। इन्द्रियहरु शिथिल हु“दै गएका थिए। संवेगहरु शुष्क हु“दै थिए। संवेदन ग्रन्थीमा लय र लचकताको पारो झर्दै थियो। र, स्मृति–शृंखला क्षतविक्षत भइरहेको थियो। न मेरो चिन्तनमा नवीनता बा“की थियो न त सिर्जनामा स्पन्दन नै। र, म केवल जिउ“दो हुनुको वृथा अभिनय गरिरहेको थिए“। मलाई कतै शून्यमा सुस्ताउन र विस्मृतिको गर्तमा विलीन हुन उत्कट इच्छा थियो। तर आफूमा इच्छा मरणको सामर्थ्य नहु“दा कालातीत लेखकको औतारमा म घिटीघिटी निरर्थक जीवन बा“चिरहेको थिए“। भाग्यवश ऊ जन्म्यो र मेरो जराजीर्ण लेखकीय जीवनको टन्टै खलास भयो।
मृत औतारमा म आफ्नो पूर्व जुनीको पि“डीमा बसिरहेको थिए“। अगाडि टेबुलमा नया“ र युगान्तकारी पुस्तक थियो। भनु“ भने न भूतो न भविष्यति खालको अनुपम पुस्तक † पुस्तक हेर्दै म कृतज्ञता प्रकट गरिरहेको थिए“— हे नवजात पुस्तक † धन्य हो तेरो स्रष्टा जसले मलाई क्लेशपूर्ण र जीर्ण अस्तित्वबाट मुक्त गरिदियो। यस्तैमा एउटा युवक आइलाग्यो। उसले मेरा चरण स्पर्श गर्न खोज्यो। म हत्तपत्त तर्किए“।
…को हौ र यो मृत लेखककको पि“डीमा के कति कामले आयौ?' युवकलाई विना भलाकुसारी मैले सोधे“।
…म हजुरको दर्शनार्थी र भिक्षार्थी हु“।' दासवत् लबजमा युवकले भन्यो।
…युवक, यो मृतकको दर्शन गरेर केको भिक्षा?' म टकटकिए“।
युवकले कारुणिक स्वरमा दर्शन र भिक्षाको अभिप्राय खुलायो। ऊ रहेछ बरा शिक्षाको डिग्रीधारी एक बेरोजगार युवक। र, सम्पादकद्वारा उपेक्षित र प्रकाशकद्वारा तिरष्कृत एक अप्रकाशित लेखक। उसको कष्टसाध्य यत्नबाट अनेक पाण्डुलिपि तयार भएछन्। तर छापिदिने उदारमना गुणग्राही कोही भएनछ। लेखेर बा“चुन्जेल शानदार नाम र लक्कु दाम अनि मरेपछि अमरत्व प्राप्त गर्ने उसको दुर्दम धोको रहेछ। तसर्थ आफ्ना दमित इच्छाहरु पूरा गर्ने जादूगरी सूत्रको खोजीमा मेरा चरण स्पर्श गर्न आएको रहेछ ऊ।
…तिमी गलत ठाउ“मा आयौ, युवक †' मैले सम्झाए“। …जो आफै“ मृतक हो उसले भिक्षार्थीलाई के दिनसक्छ?'
…मृतक' शब्द सुनेर ऊ त्यसैत्यसै चकित र विस्मित भयो। उसले ट्वा“ परेर म मृतकलाई अलिबेर अपलक हेर्‍यो। अस्तित्वमा सशरीर उपस्थित छ र खुरुखुरु बोल्दैछ। तैपनि भन्छ— म मृतक हु“ † ऊ झनै जिल् पर्‍यो। म मृतकले भने“— …कुरो सा“चो हो। म मर्नु तैपनि सशरीर देखिनु र बोल्नु उत्तरआधुनिक रहस्य हो। मृत आधुनिकहरुबाट यो रहस्यको अर्थ कदापि खुल्दैन।'
युुवकले हडबडाउ“दै पुनः मेरा चरण स्पर्श गर्न खोज्यो।
…युवक †' मैले पुनः सम्झाए“, …म मृतकका चरण स्पर्श गर्नु व्यर्थ छ।'
…तब म कसका चरण स्पर्श गरु“ त ज्यू?' याचक मुद्रामा युवकले हात मल्यो।
…जिउ“दा लेखकका,' मैले भने“।
…को हुन् त ती जिउ“दा लेखक, दाज्यैज्यू?'
…ती हेरु यी हुन्।' जिउ“दा लेखकको नाम मैले देखाए“। त्यो गरिमामय नाम हो श्री राजेन्द्र थापा। …सुन युवक †' मैले भने“, …यी जन्मे र म मरे“।'
…यी केमा जन्मे ज्यू?' युवकले खुल्दुली पोख्यो।
…यी खेलौनामा जन्मे।'
युवकले टेबुलबाट खेलौना टपक्क टिप्यो। उसले बाहिरी गातामा अङ्कित देखाउन र देखिनका लागि स्तन र भगसिवाय केही नभएकी सुभगेको तस्बिर एकाग्र दृष्टिले हेर्‍यो। र, मुग्ध दृष्टिले एक टकले हेरी नै रह्यो। अनि सोध्यो, …यो खेलौनामा के छ ज्यू?'
…नवीन दृष्टि र उत्तम कृतिको परख गर्ने अद्वितीय प्रतिभा भएका भूमिका लेखक जगदीश घिमिरेले भनेका छन्— यसको सौन्दर्य र मर्म बु‰न यो पढ्नैपर्छ। सुन युवक, तिनको दिव्य कथनमाथि मेरो अगाध विश्वास छ। तैपनि किञ्चित् धृष्टतासाथ म भन्छु— यो खेलौनामा रस छ।'
…लिङ्गरस र भगरस।'
…नवरसमध्ये यो कुन रस हो ज्यू?'
…जिज्ञासु युवक, रस जगत्मा यो नवीनतम एवं अनुपम आविष्कार हो। यो दशरस हो। यो जाज्ज्वल्यमान् रसका मुखेन्जी नाथे नवरसहरु मिति गुजि्रएका ओखतीतुल्य हुन्। ती त कालातीत रस हुन्।'
बालकले मनमोहक खेलौना खेलाएझै“ युवकले मुसार्दै र सर्सरी पाता पल्टाउ“दै खेलौना खेलायो। र, मुहुनीमय खेलौनामा दृष्टि स्थिर गरेर उसले घुटुक्क थुक निल्यो।
…दाज्यै, यसमा अरु के छ?' युवकले कौतुकमय प्रश्न मतिर तेर्स्यायो।
…यसमा लिङ्गको भयानक नर्तन छ र छ भगको उत्पात चुरिफुरी। र कर्पोरेट बजारमा नै त यो मारामार बिकिरहेछ।'
…अनि यसको प्रयोजन?' खेलौना छातीमा टा“सेर युवक बोल्यो।
…प्रयोजन उदात्त छ।' मैले बुझाउन खोजे“। …विरलाकोटी लेखक राजेन्द्र थापामा नारी जीवनप्रति असीम सहानुभूति छ। पितृसत्ताद्वारा खेलौना बनाइएकी नारीको दुरावस्था देखेर लेखकको द्रवीत हृदय सहस्र चिरा परेको छ। र नै त बडो मङ्गलकारी मुद्रामा लेखक भन्छन्— यो खेलौना सेक्सको न्यायोचित एवं मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापनको अचुक अस्त्र हो। र हो यो सेक्स शिक्षाको अत्युत्तम पाठ्यसामग्री पनि। लिङ्गको बेलगाम नर्तन र भगको असह्य तृष्णाको उत्पाती चित्र खिचेर लेखक यी सबै प्रयोजनलाई साकार रुप दिन कटिबद्ध छन्। बुझ युवक † नवीन युगको महान् लेखकमा हुनुपर्ने दृढ लेखकीय प्रतिबद्धता त यस्तो पो हो † हेर त, साधन कस्तो अनि साध्य कस्तो †'
युुवक म मृत लेखकको मृत कथन सास रोकेर सुनिरहेछ। उसमा श्री थापाजस्तै नवयुगको भव्य लेखक बनेर नाम, दाम र अमरत्व आर्जन गर्ने लालसा बढ्दो छ। ऊ सोध्छ, …दाज्यै, लिङ्गरस र भगरसको यो अजस्र प्रवाहमा अरु विशिष्टता के छ?'
…युवक † दशौ“ रसको विशिष्टताको ज्ञाता म होइन। म त केवल मृतक हु“, प्रेततुल्य कालातीत र अप्रासङ्गिक। यसका ज्ञाता लिङ्गरस र भगरसका प्रखर एवं मुखर पारखी भूमिका लेखक जगदीश घिमिरे र यी रसद्वयका गुणग्राही अनुमोदक बैरागी काइ“ला हुन्। जाऊ र तिनलाई सोध।'
…दाज्यै †' खेलौनालाई म्वाइ खान खोज्दै युवकले बिन्ती बिसायो, …यो खेलौनाको महत्तामाथि यी दुई महारथीले पारेको प्रकाश हेर्न पाए कस्तो हुन्थ्यो †'
…सुन,' बिन्तीको प्रत्युत्तरमा मृत लेखक बोल्यो, …प्रकाश प्रस्तुत छ। रसपारखी भूमिका लेखकले खेलौनालाई क्रान्तिकारी डकुमेन्ट्री उपन्यास भन्ने अलङ्कारले विभूषित गरेका छन्। अनि उनले यसलाई सेक्स जगत्मा नया“ मान्यताको क्रान्तिकारी प्रतिपादन भन्न पनि भ्याएका छन्। उता झनै रसपारखी बैरागी काइ“लाले यसलाई मनोविश्लेषणात्मक आख्यानमा वीपी कोइरालापछिको भयंकर आ“टिलो चेष्टा भन्ने दामी पगरी गुथाइदिएका छन्।'
…ए..' कुरा घत परेर होला, युवकले ल्याप्प ओठ चाट्दै मुन्टो हल्लायो।
यहा“नेर युवकलाई म मृतकले सोधे“, …युवक, जगदीश र बैरागीलाई तिनका दुर्लभ उपाधिसहित तिमी चिन्छौ?'
युवकले दुईचोटि सकारसूचक र दुईचोटि नकारसूचक भावले मुन्टो हल्लायो। तसर्थ युवकका चित्तको अन्यौलको कुहिरोलाई पन्छाइदिन मैले फर्माए“, …सुन, लेखकको तहगत सोपानमा यी दुई मनीषि उपल्लो दर्जामा पर्छन्।'
…मतलब के भने युवक, मदन पुस्कार विजेता जगदीश लेखकीय सोपानका खुट्किलामा साहित्यिका सेक्सन अफिसर हुन्। र, बैरागी काइ“ला हुन् समस्त साहित्यिक कुलका कुलपति र लेखकीय सोपानका खुट्किलामा साहित्यका मुख्य सचिव। लेखनाथीय नीति वचनलाई थोरै संशोधन गरेर भन्ने हो भने युवक, बडाले जो दियो वाणी हुन्छ त्यो सर्वसम्मत। उसो त भूमिका लेखकले यो रसदार खेलौना सर्वग्राह्य हुनसक्ने भविष्यवाणी नै गरेका छन्।'
…ए...ए...' कुराको रसमय चुरो बुझेर होला, युवक मुसुक्क हा“स्यो। र, उसले अर्को जिज्ञाषा टेबुल गर्‍यो, …अनि दाज्यैज्यू, उबेलाका बीपी र अचेलका थापाको दा“जो कसरी सम्भव भयो?'
यहा“नेर म मृत लेखकलाई सीके लालको टिप्पणीको याद आयो। कुलपति बैरागीको मन्तव्य पढेर मुख बिगार्दै तिनले भनेका थिए, …यी बैरागीले कि त बिपीका मनोविश्लेषणात्मक आख्यान पढेकै छैनन् वा पढेर बुझेका छैनन् वा खेलौना पढ्दै नपढी यिनले कुलपतिको व्यासासनमा बसेर अन्तर्यामी दृष्टिले बिपी र राजेन्द्रका कुम जोडिदिएका हुन्। यो एउटाको उग्र अवमूल्यन र अर्काको उग्र अधिमूल्यन हो।'
लालवाणी सुनेर म मृत लेखक झसङ्ग भए“। लाग्यो, यिनको टिप्पणीमा केही दम पो छ कि? तर तत्क्षण मलाई ज्ञानोदय भयो, सीके लाल पनि त आखिर मृत लेखकै हुन्। यी मृतक आख्यानलाई आदर्श र मर्यादाको मानकले जोख्न खोज्छन्। त्यो बित्थाको कालातीत मानक हो, उपयोग मूल्य निखि्रएर पत्रु भएको मानक।
लालवाणीबाट म पन्छिन खोजे“ तर त्यसले आफ्नै छाया“ले झै“ मलाई पछ्याइरह्यो। र, पूर्व जुनीको स्मृति मलाई गा“ज्न आइलाग्यो। त्यो स्मृतिले भन्यो— बिपी लज्जालुु थिए। त्यसैले त तिनले यौन मनोविश्लेषणलाई सामाजिक मर्यादाको आवरणभित्र राख्न खोजे। तिनले यौनप्रधान साहित्यमा सौन्दर्य रसको जलप लगाउन यथाशक्य यत्न गरे। तिनमा रमरम नै भए पनि साहित्यको आत्मिक उन्नयन र रुचि परिष्कारको भूमिकाको आग्रह थियो। तर यी उहिलेका कुरा हुन् जो खुइलिएर गइसके। रस महलका पारखी दृष्टियुक्त जगदीशद्वारा …क्रान्तिकारी' घोषित राजेन्द्र थापा मानक भञ्जक हुन्। लज्जा र मर्यादा एवं सौन्दर्य र सुवासजस्ता साहित्यका कालातीत मानकको एक्काइसौ“ शताब्दीमा के काम? काम छ त केवल ताण्डवकारी लिङ्ग गाथाको र अराजक भग गाथाको। म मृत लेखक भन्छु, मृत बिपीका मनोविश्लेषणात्मक आख्यानहरु स्वयं मृतक हुन्। जे जीवन्त छ त्यो केवल खेलौना हो। खेलौना मानक भञ्जनको गर्भबाट जन्मेको जीवनको कुरुपीकरण, विरुपीकरण र विद्रूपीकरणको उत्कृष्ट नमूना हो। यौन साहित्य सिर्जनाको साधनामा निजामति लेखक बिपी उर्ध्वमुखी थिए, जङ्गी लेखक राजेन्द्र अधोमुखी हुन्। तसर्थ बिपी आफ्ना कृतिसहित सर्वाङ्ग मृतक हुन्, राजेन्द्र खेलौनाको जाज्वल्यमान रसप्रवाहमा चम्किएका युगान्तकारी लेखक हुन्। यसको अकाट् प्रमाण जगदीशद्वारा प्रदत्त शानदार अलङ्कार र बैरागीद्वारा प्रदत्त उदारतायुक्त अनुमोदन हो। भाग्यमानीका भुतै कमारा भनेको यही त होला।
लालवाणीमा झुन्डिएर अतीतको स्मृतिमा म मृतक बहिकिए“छु। यो मौका छोपेर भिक्षार्थी युवक खेलौनामा डुबेछन्। यसो हेर्छु त मेरीबास्सै, युवकको अनुहार खेलौनाको आभाद्वारा एक तमासले आलोकित र पुलकित छ।
…कस्तो लाग्दैछ, युवक?' ठट्ट्याइलो स्वरमा सोधे“।
…रस अमृततुल्य छ, दाज्यै।' मुख मिठ्याउ“दै युवकले भन्यो।
भन्ने र सुन्ने कुरा सकिएझै“ मेरो पूर्व जुनीको पि“डीमा अलिबेर सन्नाटा छायो। अनि निधार मुजा पार्दै युवकले जिज्ञासाको अर्को पत्र पल्टायो। …खेलौनाबारे अरु केही मीठो—मसिनो कुरा बा“की छ कि दाज्यैज्यू?'
…युवक, यो दिव्योपदेशको क्रान्तिकारी कथा र अमर गाथा भनेर कहिल्यै सकि“दैन।'
…तथापि थप केही अमूल्य सुन्नपाए हु“दी..' युवकले हात जोड्यो।
…सुन युवक,' म मृतक भन्न थाले“, …जेको पनि पृष्ठभूमि इतिहास हुन्छ। खेलौनाको पनि छ।'
…त्यो पृष्ठभूमिमा के छ दाज्यैज्यू?'
…त्यो पृष्ठभूमिमा नीलोचोली छ र आगो छ।'
…यी चोली र आगो के हुन् ज्यू?'
…यी पुराना कालजयी कृति हुन्। यिनका छद्मभेषी रचनाकार हुन् गोर्खाल्याण्डका सुवास घिसिङ। यी घिसिङ लिङ्गरसीय एवं भगरसीय लेखनमा राजेन्द्र थापाका जनक, अग्रज र प्रेरक हुन्। राजेन्द्रको आजको क्रान्ति सुवासले पहिल्यै छेडेका थिए। म सम्झन्छु, त्यो क्रान्तिले नेपाली शब्द संसारमा सानोतिनो उथलपुथल मच्चाएथ्यो। क्रान्तिको यो फा“टमा सुवास शिशु र सिकारु हुन्, राजेन्द्र हुन् बयस्क र पारङ्गत। सुवासले रसक्रान्ति अधुरै छाडेका थिए। सुवासको बि“डो थाम्दै राजेन्द्रले अहिले छलाङ मारे। रस जगत्मा सुवास लिङ्गरस र भगरसको सपाट वर्णनमा सीमित थिए। राजेन्द्रले यसमा नया“ आयामा थपेका छन् र नौलो क्षितिज उघारेका छन्। राजेन्द्रको लेखनमा नवीन रसचेतनाको नूतन उद्घोष छ, यसमा शानदार शास्त्रार्थ छ, यसमा घतलाग्दो अर्ती–उपदेश छ। र नै त यो खेलौना नीलो चोली र आगोलाई फिका तुल्याउ“दै आफ्ना मौलिक विशिष्टताहरुले विपुल छ।'
घडी हेर्दै युवकले आग्रह गर्‍यो, …दाज्यै, म सभक्ति राजेन्द्रपथमा लाग्न आतुर छु। म नाम, दाम र अमरत्व आर्जन गर्ने तृष्णा तृप्त गर्न चाहन्छु। आज्ञा होस् दाज्यैज्यू, मैले अब के गर्नुपर्ला?'
…गर्नुपर्ने कुरा तीनवटा छन्,' म मृत लेखकका मुखारविन्दबाट आज्ञा फुर्‍यो, …युवक, तिमी खेलौनाको भाग दुई लेख। त्यसमा यीभन्दा सबल, सशक्त, ऊर्जाशील र क्रियाशील लिङ्ग र भगहरुको निर्माण गर। त्यसमा खेलौना एकलाई माथ गर्ने गरी लिङ्ग नर्तन र भग छम्छम्को जादूगरी छटाको चमत्कार सिर्जना गर। बस्, यो हो पहिलो काम।'
…दाज्यै, अनि दोस्रो?'
…दोस्रो काम हो सुयोग्य पात्रका हातबाट भूमिका लेखाऊ।'
…दाज्यै, भूमिका शिरोमणि प्राडा गोविन्दराज भट्टराईबाट लेखाए कसो होला?'
…हु“दैन, युवक। त्यो काम लाग्दैन। खेलौनाको लिङ्ग एवं भगरसीय चेतनाको डसाइबाट सके यी गोविन्दको उत्तरआधुनिक चेतना मूर्च्छा पर्‍यो होला। यस अर्थमा यी गोविन्द पनि त मृत लेखक हुन्। फेरि, यी गोविन्द न लेखन जगत्का पृरस्कृत सेक्सन अफिसर हन् न त यी साहित्यिक कुलका कुनै पति नै हुन्। तसर्थ यी लेखकीय सोपानका केवल खरिदार हुन्। युवक, खरिदार नाथेको भूमिकाले रसमार्गी कृतिमा केको चमक थप्छ?'
युुवकले लामो सुस्केरा हाल्यो। अनि कन्सिरी कन्याउ“दै सोधनी गर्‍यो, …अनि प्राडा अभि सुवेदीको भूमिका नि ज्यू?'
…त्यो पनि काम लाग्दैन।' जीवन्त लेखक बन्न चाहने युवकलाई म मृत लेखकले सम्झाए“। …हेर, अभि साहित्यमा जीवनका दृश्य र अदृश्य, छूटप्राप्त र निषिद्ध, यौन र अर्थ, धर्म र राजनीति सबै क्षेत्र र पत्रको यथार्थ उजागर हुनुपर्ने उदार आग्रह राख्छन्। अभि साहित्यका विषयहरुमा पर्दाप्रथालाई मान्दैनन्। तर अभि पनि बिपीजस्तै लज्जालु छन्। यी साहित्यमा सौन्दर्य र मर्यादाका कुरा गर्छन्। यी पनि आत्मिक उन्नयन र रुचि परिष्कारको जिरह गर्छन्। पुरस्कारविहीन र पदहीन अभि लेखकीय सोपानका हदै भए नायक सुब्बा हुन्। यी पनि मृत लेखकै हुन्। युवक, मृत लेखकले जीवित लेखकका कृतिको भूमिकामा के लेख्छ?'
…उसोभए दाज्यै, ती सुयोग्य लेखक को हुन् जसको भूमिकाले कृतिलाई शोभा र शान दिन्छ?'
…युवक, ती रसजगत्का क्रान्तिद्रष्टा र लेखकीय सोपानका सेक्सन अफिसर श्री जगदीश घिमिरे हुन्। म मृत लेखक ठोकेर भन्छु युवक, खेलौना एकपछि खेलौना दुईमा भूमिका लेख्ने ल्याकत भएका एकमात्र जीवन्त लेखक श्री घिमिरे नै हुन्।'
…ज्यू ज्यू,' कुरा बुझेर युवकले नाक मुसार्दै मुन्टो हल्लायो। …अनि तेस्रो कुरा दाज्यैज्यू?'
…तेस्रो कुरा हो, साहित्यिक कुलका कुलपतिको अनुमोदन।'
…बस्, बस्।' युवक हौसियो। …यति भए चीज बन्छ हैन, दाज्यैज्यू?'
…बन्छ युवक। तीन लाखको थैलो लिएर पाण्डुलिपि लिन ङिच्च हा“स्दै रसपारखी प्रकाशक तिम्रो घरदैलोमा धाउ“छ। अनि अरु लाखहरु लुतुलुतु आइरहन्छन्। सञ्चारमा प्रचारबाजीको धूलो उड्छ। प्रोफेसर र प्राडा, कवि र लेखक, नाट्यकर्मी र सिनेकर्मी, आदि र इत्यादि लिङ्गरस र भगरसबाट निर्मित कृतिको महात्म्य गाउन लाम लाग्छन्। ज्वलन्त उदाहरण राजेन्द्र थपाको खेलौना तिम्रा नाकैअगाडि छ“दैछ। यो मृतकवाणी ध्यानले सुन युवक, थापाको खेलौनामाथि अव विद्यावारिधीको लहर चल्नेछ। हेरिराख, यसले सत्यनारायण व्रतकथाको ठाउ“ लिन कत्ति बेर छैन। भन त युवक, पीडित गोमा ब्राह्मणीहरुको उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता इहलोकमा योबाहेक अरु के छ?'
…दाज्यै, मेरो भविष्यबारे एक वचन....'
…क्रान्तिकारी राजेन्द्रपथमा समर्पित होऊ, जगदीशका चरण स्पर्श गरेर भूमिका लेखाऊ, कुलपति वैरागीको मूल्यवान् अनुमोदन प्राप्त गर। बस्, युगान्तरको कोशेढुङ्गाका निर्माता राजेन्द्र थापापछि कुनै जीवित लेखकको भविष्य उज्ज्वल छ भने त्यो तिम्रै हो, युवक।'
युुवकले कृतकृत्य हु“दै निहुरिएर बिदाइ चरण स्पर्श गर्न खोज्यो। तर्किन खोज्दै म मृत लेखकले भने“, …आशीर्वाद छ युवक, रसमय राजेन्द्रपथको सदा जय होस् †'
Nagarik Akshyar Chait 30, 2069
बेस्टसेलर : तथ्यमा भ्रम
अक्षरमा गत साता …बेस्टसेलरः भ्रम र तथ्य' अनुसन्धान ज्यादै परिश्रम गरेर तयार मात्र पारिएको हैन, कसैले नलेखेको विषयमा गरिएको प्रशंसनीय कोसिस पनि हो। क्याबात् लेखक भाषा शर्मा तथा फणीन्द्र संगम, उहाँहरू स्वयं नै कतै भ्रम र तथ्यको जालमा फसेका वा फसाइएका पो हुन् कि? खोजीखोजी गरिनु पर्ने अनुसन्धानमा कतै रोजीरोजी त गरिएन?
सन्दर्भ हो मेरो …खेलौना' उपन्यास तथा यसको प्रकाशन संस्था याम्बुरी बुक प्वाइन्टको चर्चा पनि नहुनु। यसले माघ १२ मा दुई हजार कपीबाट गरिएको रिलिजमा १५ गते र माघ अन्तसम्म गरी तीन प्रिन्ट गर्दै एक महिनामा दस हजार कटायो। अब दोस्रो महिनासम्ममा १२ हजार कटाएर, नयाँ कलेवरसहित दोस्रो संस्करण निकाल्ने तयारीमा छौं। वितरकहरूलाई उधारो र बढी कमिसनमा दिने बाध्यताविरुद्ध नगदमा र कम कमिसनमा दिँदा पनि एक महिनामा त्यो बिक्री र चर्चा लेखकहरूका दृष्टिमा किन परेन? यसै सन्दर्भमा संस्करण र रिप्रिन्टको फरक पनि लेखकले देखाइदिएको भए यसबारेका भ्रम मेटिने थियो। छाप्ने एकै प्लेटबाट बारबार गरी १२–१३ हजारसम्म छापिने कार्य रिप्रिन्ट भए पनि त्यसलाई यति र उति संस्करण भनी भ्रम फैलाइने प्रचलनको तथ्य पनि समावेश भएको भए राम्रो हुने थियो। संस्करणमा त नयाँ कलेवरलगायत अन्य धेरै परिमार्जन र सामग्रीमा नयाँ प्लेट बनाएर निकालिनुपर्छ।
मेरो …खेलौना' ले कुनै अर्को किताबलाई बाधा पारेको भन्दै एक प्रकाशकले एक ठूला अखबारको साहित्य सम्बन्धी विशेष पातोमा खेलौनालाई पूर्ण निषेध गराएको फोहोर खेलका भुक्तभोगी भएको हुँदा उक्त अनुसन्धानमूलक लेखमा पनि नामोनिसान मेटिँदा अक्षरमा पनि लौ न पुगेछन् कि भन्ने झसंग हुनु स्वभाविकै भयो। प्रकाशक विशेषहरूले मिडिया विशेषलाई कुनै कृति विशेषका विरुद्ध उपयोग या निषेध गरेर बेस्टसेलर हुन नदिने कार्यहरूबारे पनि लेखकले भविष्यमा अनुसन्धानका दायरामा पार्नुहोला भन्ने आशा पनि गरेको छु।
गत शनिबारको …अक्षर'मा खगेन्द्र संग्रौला दाजुले मेरा …खेलौना' खेल्दा पड्केर हो वा हजारौं हजार पाठकले पढिदिएर, पैसा बर्सियो भनेर हो कि आफू मरेको घोषणा गरेकाले म मर्माहत छु। करिब ३८ वर्षअघि यौटा उपन्यास लेखेर लेख्न छाडे पनि अहिले खेलौना लेखेर खगेन्द्र दाजुलाई आत्महत्या गर्न विवश बनाएछु मैले। दाजु मर्ने थाहा भए, यस्तो जिनिस किन लेख्थें र!
दाजु नमर्नूस्। तपाईं मर्नुभयो भने पत्रकारितामुखी साहित्य एक्लै कसरी बाँच्ने? साहित्यमा पत्रकारिता : पत्रकारितामा साहित्यको अविष्कारक दाजुहरूकै कारण साहित्यिक सृजना बन्न पुगेका छन्– लीलामय कफी गफ, लोकल कुखरा खा' गफ, पसल्नीसित मोबाइल साटिया, कविहरूले रक्सी खा', भुटन चाख्या, घरको बिरालो मर्‍या, श्रीमतीले अमेरिकाबाट फोन गरेर के तरकारी खानु भो भनेर सोध्या गफ, छोरी सुत्केरी भा' गफहरू।
चार–पाँच वर्षअघि दाजुले मलाई फोनमा भन्नुभएको थियो। बिहानै देवेन्द्रराज पाण्डेजी, दाजुका घरमा हतारहतार आउनुभएछ र भन्नुभएछ, …आजको अखबार पढ्नुभो? अर्को खगेन्द्र संग्रौला जन्म्यो।' सन्दर्भ राजेन्द्रको लेखको थियो। त्यही स्मरण गरेर दाजुले राजेन्द्र जन्मेपछि खगेन्द्र मर्‍यो त भन्नु भा'को हैन?
गतांक पढ्दा दाजुका मनका पीडा यो मनुवाको सानु बुद्धिले पक््रयो। प्रकाशकले अग्रिम दिएका चार लाखका कुरा गोप्य नराखेर दाजुलाई पीडा दिएछु, माफ पाऊँ। झन् प्रकाशकले २५ प्रतिशतका दरले चैत १५ सम्मको आठ हजार प्रतिको पाँच लाख २० हजार रोयल्टीको हिसाबकिताब बुझाएको त दाजुलाई भन्दै–भन्दिनँ। हाम्रा किताब एनजिओले छाप्दैनन्। हामीलाई कुनै दल या नेताले पनि पक्षमा लेख लेख्न खुसुक्क …चपु' दिँदैनन्। अनि …खेलौना' लेख्नुपरेको हो, दाजुलाई मार्न हैन। न त पत्रिकामार्फत् साहित्यकार बनेकाहरूको चित्त दुखाउनै हो।
बुद्धिजीवीबाट आलोचित भए पनि आमजनता खोजीखोजी पढिरहेका छन् भनेर पुस्तक साहुहरूले भनेका कुरा दाजुकै लेख छापिएको दिनका साप्ताहिकमा पनि छापिएको छ। वास्तवमा यी आमजनता र बुद्धिजीवी को हुन्? बुद्धिजीवी भनेको सायद दाजु, समालोचना र बुक रिभ्युको फरकमै अलमल हरि अधिकारी, अनमोलमणि, रामेश्वर बोहरा र तिनका चेला चपेटा हुन् कि बाँकी लाखौं सचेत–शिक्षित मान्छे, जसलाई आममान्छे भनियो! आममान्छेको अर्थ अशिक्षित, गरिब, दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने किसानहरू मानिने हो भने दाजु, तिनीहरू किताबै किन्दैनन्। किताब अर्थात् …खेलौना' किन्ने ती दस–बाह्र हजार के आममान्छे?
अखबारमा प्रवेश नपाउने प्राडाहरू, शिक्षकहरू, बैंकरहरू, पत्रकारहरू, उद्योगपतिहरू, साहित्यकारहरू, कर्मचारीहरू, डाक्टर, इन्जिनियरहरू, न्यायाधीस र वकिलहरू, राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताहरू तथा कलेज युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरूबाट नियमित तारिफ पाउँछु। के आममान्छे भनेका तिनै हुन्? प्रत्यक्ष कल या मेसेज दिनेमा करिब ७० प्रतिशत महिला छन्। हरेकले भन्छन्, …पुस्तकको नारी आवाजका लागि धन्यवाद।' धेरैले भन्छन्, …किताब पढ्दा आफूलाई भेटेको र सँगसँगै रोएको पहिलोपटक हो।' के त्यस्तो हुन्छ यौनकथामा?
पुरुष पाठक महिलाको आवाज सायद सुन्दैनन्। तर भन्छन्, …आफूलाई कतै न कतै इन्द्रको मनोवृतिभित्र पाएँ।' परशु घिमिरेका एक बैंकर मित्रले यो पढेपछि …पुरुष भएकोमा आफूलाई घिन लाग्न थालेको छ' भनेछन्। ती बैंकरले देखेका कुरा जुन दिन खगेन्द्र दाजुले देख्नुहुनेछ त्यस बेला यो आत्महत्या रोेक्नुहुनेछ। तर दाजुका बाहुनवादी, पुरुषवादी, वामपन्थी तथा स्वमहानत्वका चस्माका कारण यो देख्न बु‰न सक्नुहुनेछैन। जब आफूबाहेक अरू सब सानो लाग्छ, तब अरूका गहिराइभित्र पस्न सक्दैन मान्छे। दाजुको समाधान आत्महत्या हैन, आत्मपरिचय हो, अरूलाई हीन ठानेर बहुलाजस्तो झम्टिन छाड्नु हो। आफ्नो मनको खगेन्द्र बुद्धिलाई फेला पार्नु हो। दाजुको उदात्त ज्ञान, निडर लेखन, कलमको नियन्त्रणले दाजुभित्रको सरस्वती–शक्ति स्पष्ट झल्काउँछ। तर राजनीतिक रूपले छोपेको बु‰छु, म दाजुको साहित्यिक कायालाई। साहित्यिकत्व र राजनीतिकत्व दुवैलाई एकै थालमा मिसाएर खानु भएकाले पेट खराब भएको हो।
पत्रकारी साहित्यमा थिम चाहिन्न। तर साहित्यमा थिम हुने हुँदा साहित्यक चेत भएकाले थिमलाई केन्द्र बनाएर पात्र र घटनाको चक्कर हेरेरमात्रै मूल्यांकन गर्नुपर्छ। दाजुले हरि (अधिकारी) पथमा झैं थिमै नबुझी कभर हेरेर बोलेको सुहाउँदैन। खेलौनाको थिम के हो? थाहा पाउनुभयो त?
खेलौनाको थिम यस्तो छ– …पुरुष नामक मनुवाका गिदीमा महिला योनी नामक जिनिस भएकैले पाँचहजार वर्षदेखि नारीमाथि शोषण हेतु पुराण शास्त्र सामाजिक रितीरिवाज बनाइएका हुन्। यसै कारण आधुनिक युगमा पनि नारीमाथि दानवीय व्यवहार भइरहेकै छ। तर अबका नारी सहँदैनन्। त्यसैले स्मिताले बोलेर विद्रोह देखाइन्।'
स्मिताले नबोले पनि त हुन्थ्यो। किन बोलिन्? उपन्यासको अधार स्मिताको यौन र प्रेम कथा हैन, त्यही विद्रोह हो यसको आधार, चेत भया! मनुवाको गिदीका त्यही जिनिसका बदमासी प्रमाणित गर्न स्मिताका प्रेम र सेक्स एडभेन्चर घरको फर्मा रूपमा उपयोग गरिएका मात्र हुन्। मूल पात्र स्मिता हैन, पुरुष गिदीको प्रतीक इन्द्र हो। स्मिता र इन्द्रलगायत एघार पुरुष पात्र र सात महिला पात्रहरूबाट पुरुष गिदीकै चिरफार गरिएको छ, परिस्थिति अलगअलग भए पनि। स्मिताका पाँच परिच्छेद झिके पनि उपन्यास बन्छ, इन्द्र्र झिके थिम प्रमाणित हुन्न। उपन्यास बन्दैन। यो बु‰ने साहित्यकार अझै छन्। दादाजी (कमलमणि) ले धेरै वर्षपछि सायद पूरा पढेको यही पुस्तक होला। …स्मिता पात्र केही पनि हैन, इन्द्र गजबको पात्र बनाउनुभयो' भन्दै दादाजीले इन्द्रका अन्तर्द्वन्द्वबारे गहन प्रतिक्रिया दिनुभयो। सायद खेलौना बुझेका र रुचाएका कारण कमलमणि सर आममान्छे या …नबुद्धिजीवी' मा पर्नुहुन्छ होला! त्रिविमा पनि सायद साहित्य बु‰ने नभएरै होला, एमएडको नेपाली विभागले नारीवादी उपन्यास खेलौनाको लैंगिक विभेद सम्बन्धमा र भाषा शैली इत्यादि दुई विषयमा थेसिस तोकेको छ। अब तिनलाई पनि ठोक्नुस्।
दाजु, यो थिममा लेखिएका कथा नीलो चोली र आगोजस्ता यौन कथा बन्नै सक्दैनन्। महिलाका लागि पहिलो र अन्यका अनुभव एकदम अलगअलग हुने हुँदा स्मिताका पाँच घटनाका बयान एकदम महिलाकै दृष्टिकोणबाट चित्रित गरिएका छन्। त्यसैले पहिलो ओरलवाला मित्रसँगको १८ वर्षे पात्रालाई विस्तृत आनन्दमयी खोजमुखी बनाइएको छ भने त्यो अनुभवपछिको तर पहिलो प्रत्यक्ष संसर्गमा हरेक महिलालाई झैं आनन्दविहीन, पीडादायी, उत्सुक्तापूर्ण सानु कथा बयान गरिएको कलात्मकताको अर्थ बु‰नूस्। स्मिताका मूल प्रेमी पुष्पका हकमा त झन् सेक्सको बयानै छैन। यौन कथामा त यसरी सेक्सलाई महिलाको आँखाबाट मनोवैज्ञानिक प्रस्तुति गरिन्न। पुरुषका आँखाबाट हरेक घटनालाई उत्तेजनाको हदसम्म पुर्‍याइन्छ। यो गूढ तत्व बुझे काम लाग्ला। यौनमा लेखेर पैसा कमायो भन्नेहरूलाई सुझाव छ, यौनका कथा यसरी बिक्दैनन्। न त यत्रो फराकिलो पाठकवर्गलाई यसले हल्लाउन सक्छ। यौनका मनोविज्ञान लेख्न भने धेरै गाह्रो हुन्छ। वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान गर्नुपर्छ। पत्रकारी साहित्यमा जे खकारे पनि जे डकारे पनि सम्पादकले सकार्ने र भोलिपल्टै छापिने हुनाले अध्ययनको चलन नहोला। झन् पछि त्यसैका संकलन निकालेर साहित्यिक कृति नामधारण गर्न पनि सजिलो। एकपटक विमल निभाजीले भनेका थिए, …आज लेखेको भोलि नै छापिएन भने कस्तो नराम्रो लाग्छ।' पत्रकारी साहित्य र साहित्यमा फरक यही हो। साहित्यमा त सोच्न, लेख्न र छाप्न तथा बिक्न र पढ्न पनि सबैमा समय लाग्छ, मेहनत र अध्ययन चाहिन्छ।
साहित्यलाई दाजुहरूले गर्नुभएको परिभाषामा दाजुहरू रमाएरै बस्दा फरक केही पर्दैन। तर आजभोलि साहित्यको परिभाषा जनता स्वयंले आफैं बनाउँछन्, पुस्तक आफैं छानेर। तपाईं मरे मर्नूस्, तपार्इंका चेलाहरू पनि मरे मरून्, कृतिमा अनेक खोट लाउनूस्; तर जनता आफैं न्यायाधीस हुन्, आफैं फैसला गर्छन्। साहित्य कुन हो कुन हैन? तपार्इंहरूले आममान्छे भने पनि, स्वाद खराब भएका भने पनि, द्यौता तपाईंहरू हैन, तिनै हुन्। तपाईंहरूका आत्मरत्तिभन्दा परै छन्, ती आमपाठक भनी तपार्इंहरूले होच्याएकाहरू। श्लील–अश्लीलको परिभाषा, साहित्यको परिभाषा या आख्यानको एरिस्टोटलीय या शास्त्रीय मान्यता अब एकेडेमिकल बिरालो बँधाईबाट मुक्त भइसक्यो। सेक्स कथामा सेक्सको बयान खेलौनामा भन्दा अझ बढी स्पष्ट गरिएको भए पनि त्यो अश्लीलता हुन्न, अत्यावश्यक हुन्छ, आजको परिभाषामा। आज कथा बोलचालको भाषामा लेखिने हुँदा बयान पनि त्यही भाषामा हुन्छ। एक करोड किताब बेचेर निजी जेट चढ्ने पायलो कोयलोको …इलेभेन मिनेट' पढ्नूस्। संसर्गको अवधि ११ मिनेट भन्ने थिम भएकाले कहानी यसैमा चक्कर खुवाइएको छ। पत्रकारी साहित्यकारहरूले विदेशी आख्यान पढे भने थिम, भाषाशैली प्रस्तुतिमा निखार आउँछ। बुक रिभ्यु लेख्न पनि ज्ञान आउँछ। सानु कुवाभन्दा बाहिर ठूलो संसार हुन्छ साहित्यको। किनभने साहित्य अब एक देशमा मात्रै बाँधिन्न।
दाजु अन्तमा विन्ती छ नमर्नूस्। बरु खगेन्द्र पथका पत्रकारी साहित्यकार हरि, अनमोल र रामेश्वरलगायत अरू बीस–पच्चीस जनाका खुसीको लागि मै मर्दिन्छु, खेलौनालाई पनि जलाइदिन्छु। द्रौपदी नामक अर्को त्योभन्दा बढी विवादास्पद कसैको जीवनकथामा लेख्दै गरेको उपन्यास पनि आजैबाट लेख्न बन्द गर्छु। तर तपाईंहरू नमर्नूस्। अखबारका केही पाता कसरी भर्ने चार हजार शब्दहरूको ओभरलोडबाट, समस्या पर्छ पत्रिकाका ब्युरो चिफहरूलाई।
तर समस्या छ दाजु, हामी जो मरे पनि खेलौना मर्दैन। झन्झन् डढेलोझैं आममान्छेका मनमस्तिष्कमा सल्किँदै जान्छ। र, एक दिन पुरुष गिदीको योनीमै आगो लगाइने छ। किनभने खेलौना किताब हैन, नारीलाई …यौन खेलौना' ठान्ने पुरुषवादविरुद्धको संगठित आवाज हो। गोमा ब्राह्मणीको बाल शोषणविरुद्ध बोल्नेसँग तपाईं जत्ति रिसाए पनि अब बाल बलात्कारीका लिंग काट्ने बेला आउँदैछ दाजु। तपार्इंलाई अखबारी गालीगलौजमै छाडेर आममान्छेको संसारमा पुगिसक्यो समाज। आपलोग करें तो लीला, हम करें तो केरेक्टर ढिला? गलत दाजु गलत π
Nagarik Akshyar, Baisakh 7, 2070
म मृत लेखक बिहान आ“खा मिच्दै र हाई काड्दै उठे“। यसो हेर्छु त पि“डीको टेबुलमा एउटा लिखित कागत छ। कागतको शिरमा …प्रतिक्रिया' लेखिएको छ। म झस्के“। चालु अधोमुखी राजनीतिमा अर्काका वचनमाथि प्रतिक्रिया मात्र गर्ने प्रतिक्रियावादीहरूको बिगबिगी छ। अहो † मेरो टेबुलमा रातिबीच कुन प्रतिक्रियावादी आइलागेछ? तर बु‰न खोज्दा कुराको भित्री तत्व अर्कै रहेछ। त्यो त जगदीश घिमिरेद्वारा …क्रान्तिकारी' संज्ञाले विभूषित …खेलौना'का सृष्टिकर्ता राजेन्द्र थापाको प्रतिक्रिया पो रहेछ।
प्रतिक्रिया शिरदेखि पुछारसम्म सर्सरी पढे“। राजेन्द्र थापाले आफ्नो अनुपम प्रतिभा, आफ्नो अद्वितीय कृति, आफ्नो सहस्र प्रशंसा र आफ्नो प्रिय पोर्नोग्राफीको सौन्दर्यशास्त्रमा प्रकाश पारेका रहेछन्। झर्झराउ“दो प्रकाशले मेरा आ“खा तिरिमिरी भए। डर लाग्यो, म मृतकले यी जीवितको प्रतिक्रियामाथि के प्रतिक्रिया गर्नु? तै पनि निम्नस्तरीय थाङ्ने गनगन छाडेर उच्चस्तरीय थाङ्ने गनगनबारे म एकाध प्रतिक्रिया गर्छु। यो प्रतिक्रिया लेख्दा जानअन्जान राजेन्द्र थापाको पोर्नोग्राफी पथ पछ्याउन खोज्ने प्रतिभाहरूलाई म सम्भि्करहेछु।
अचेल एकथरी भुइ“फुट्टा लेखक र कतिपय रातारात मालामाल हुन खोज्ने द्रव्यपिचाशी प्रकाशक पाठकगणलाई ठग्ने धन्दामा लिट्टी कसेर लागिपरेका छन्। ती गोप्य दूलोमा खुसुखुसु चोचोमोचो गर्छन्। अनि जाली कथा रच्छन्। जाली कथामा प्रकाशकले लेखकलाई अग्रिम तीन–चार लाख रुपिया“ दिन्छ। यो तीन–चार लाखको हल्लाले पाठकगणलाई दिग्भ्रमित तुल्याउ“छ। पहिल्यै तीन–चार लाखको थैलो पाउने कृति कस्तो होला? त्यसबाट त अमृतरसको वर्षा पो होला कि? भ्रान्तिकारी सम्मोहनबाट वशीभूत पाठक खाई नखाई चोट्टा अन्तरेको चुत्थो पुस्तक किन्छ। अनि वायु वेगमा यति हजार र उति हजार बिक्यो भन्ने अर्को जाली कथा कथिन्छ। जाली कथामा लेखक अरु लाखौ“ रकम कुम्ल्याउ“दै जान्छ। कुन्नि, राजेन्द्र थापाको लाख–लाखको कथाको अन्तर्यमा पनि यस्तै छलकारी ठगवृत्ति पो लुकिबसेको छ कि †
बुद्धिजीवी नामक जीवहरू अस्तित्वमा रहनु राजेन्द्र थापाको दुःख हो। तर यो दुःखको सामना गर्न उनी सशक्त छन्। र नै उनी भन्छन्— बुद्धिजीवीले आलोचना गरेर के नापिन्छ? आम जनता खोजीखोजी पढिरहेकै छन्। कुरा ठीक हो। म मृतक पनि भन्छु, बुद्धिजीवी भनिने हरि अधिकरी, अनमोलमणि, रामेश्वर बोहरा आदि इत्यादि नवीन युगको देदीप्यमान् सूर्यसरहका राजेन्द्र थापाका मुखेन्जी मिति गुजि्रएका ओखतीजस्ता लेखक हुन्। ती पाषाण युगका हन्, राजेन्द्र सुवर्ण युगका। …खेलौना'जस्तो अनमोलको माल पाएर ती नाथेहरू चालै पाउ“दैनन्। पोर्नोग्राफीको रसको महत्ता नबु‰ने अरसिकहरूले …खेलौना'जस्तो रसभरि चमचमको तारिफ गर्न कसरी पो जानुन् र?
मुक्त कण्ठले आत्मरति गर्ने धन्दामा राजेन्द्र थापा अति उदार रहेछन्। उनको आत्मरति सुन्दा लाग्छ, सिंगो देशका नरनारीहरू सात काम छाडेर उनको पोर्नोग्राफीमा लिप्त भएका छन्। त्यसैले त उनी धक्कु लाउ“छन्— …अखबारमा प्रवेश नपाउने प्राडाहरू, शिक्षकहरू, बैंकरहरू, पत्रकारहरू, उद्योगपतिहरू, साहित्यकारहरू, कर्मचारीहरू, डाक्टरहरू, इन्जिनियरहरू, न्यायाधीश र वकिलहरू, नेता र कार्यकर्ताहरू तथा कलेज युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरूबाट म नियमित तारिफ पाउ“छु।' तारिफ गर्नेहरूको यो लामबन्दी देख्दा लाग्छ, मुलुकै राजेन्द्रकृत पोर्नोग्राफीपथका पछि लागिसक्यो। यतिका जन तारिफको लाममा उभिएपछि नाथे हरि अधिकारी, अनमोलमणि, रामेश्वर बोहरा आदि इत्यादिको आलोचनाको के अर्थ? यी त केवल तारिफको महासागरको दूर किनारका पानीका थोपा हुन्। यी नगण्य, स्वत्वशून्य र अर्थहीन जीव हुन्। आत्म–प्रशंसाको अन्तहीन कथा राजेन्द्रले कथ्ने र सुनाउने अनि अरुले चुपचाप पत्याउने हो। नपत्याए अति दुर्लभ मालको मूल्य नबु‰ने लठ्ठक भनेर तिनले फत्तुर लगाइहाल्छन्। पाठकले …खेलौना' राजेन्द्र थापाका आ“खाले पढिदिनुपर्छ, उनकै इच्छाअनुरुप बुझिदिनुपर्छ र उनकै तृष्णाअनुरुप तारिफ गरिदिनुपर्छ। जो यसो गर्दैन त्यो मूर्ख हो। उनलाई मनपर्ने चीज प्रशंसा, प्रशंसा र फेरि पनि प्रशंसा हो। त्यसैले उनी आफ्नो शिरमाथि आफै“ प्रशंसाको वर्षा गर्छन्। बाफ रे, उनका महिलाहरूको प्रशंसाको ओइरो † अहो † त्यो ओइरोस“ग चेरापुन्जीको पानीको वर्षाको के दा“जो? मलाई डर छ, महिलाहरूको प्रशंसाको चाङले थिचिएर युगान्तकारी प्रतिभा राजेन्द्र थापाको प्राण पखेरु नै उड्ने पो हो कि †
म मृत लेखक अबुझ हु“, यो खसोखास सत्य हो। राजेन्द्र थापाका शब्दमा म …बाहुनवादी, पुरुषवादी, वामपन्थी' रहेछु। मृतक भएपछि बल्ल थाहा पाए“। यिनै …वादी' र …पन्थी'का पर्खालहरूले छेकेर म उनको …खेलौना'को चमक देख्न सक्दो रहेनछु। सशक्त राजेन्द्रले बबुरो म अशक्तका आ“खा खोलिदिए। तर दुर्भाग्यवश, मृत्युपछि खुलेका आ“खाले …खेलौना'को महत्ता देख्न र बु‰न म असमर्थ छु। मलाई आफ्नो पूर्व जुनीका आ“खाको झल्झली सम्झना भइरहन्छ। ती बासी आ“खाले म राजेन्द्रको …खेलौना'मा पोर्नोग्राफी सिबाय केही देख्दिन“। राजेन्द्रजस्तो राजनीतिमुक्त, शुद्ध, चोखो, कञ्चन र फटिक पोर्नोग्राफीकार बन्न नसकेकोमा म अत्यन्तै दुःखी छु।
थिम नचाहिने …पत्रकारी साहित्य' पनि हु“दो रहेछ। मेरो थिमविहीन र अर्थहीन …पत्रकारी साहित्य'बारे राजेन्द्रले मलाई बुझाए। उनको अपत्रकारी एवं गहन साहित्यलाई भने थिम चाहि“दो रहेछ। उनले मलाई सिकाए। उनको थिम रहेछ …पुरुष गिदीमा महिला योनि'को उपस्थिति। हेर्नुस्त दृष्टिको कस्तो तीक्ष्णता, अनुभूतिको क्या सूक्ष्मता, संवेदनाको क्या लचकता † तब न यस युगका विरल पोर्नोग्राफीकार राजेन्द्र थापा † तब न उनको अब्बल सिर्जना …खेलौना' †
मुलुकको जनसंख्या छिट्छिटो बढ्दो छ, नाम भने जत्तिका तत्ति छन्। पुग्दो नाम नहुनाले गर्दा कमलमणि नामका हजारौ“ मानव नेपालमा होलान्। कुनै कमलमणिले धेरै वर्षपछि …खेलौना' पूरा पढेछन्। र, राजेन्द्रका नजरमा यो पठन …खेलौना'को श्रेष्ठताको दह्रो दसी हुन गएछ। यो जाज्वल्यमान् पोर्नोग्राफी त्यसरी पढिसक्ने रसपारखी कमलमणि को होलान्? कमलमणि दीक्षिति त नहोलान् नै। आफ्नो कृतिको उच्चतम गुणवत्ताको महात्म्य गाउ“दै जा“दा …खेलौना'ले त्रिविमा उच्च दर्जा पाएको कथा सुनाउन पनि राजेन्द्रले भ्याएछन्। म मृत लेखक भन्छु, यो नाथे दर्जा केही होइन। शब्द संसारमा एक्काइसौ“ शताब्दी निःसन्देह पोर्नोग्राफीको युग हुनेछ। यस पोर्ने युगमा …खेलौना' …गीता', …बाइबल' र …कुरान' तीनोटैको सट्टाभर्ना हुन कत्ति बेर छैन †
पोर्नोपन्थी राजेन्द्र थापाको सौन्दर्यशास्त्रीय दृष्टिमा खास्साको नवीनता छ। उनका प्रखर दृष्टिमा साहित्य–कलामा एरिस्टोटलको मान्यता अब थोत्रियो। उसो त क्रोचेदेखि टीएस एलिएटसम्म, फ्रेडरिख एंगेल्सदेखि प्लेखानोभसम्म, क्रिस्टोफर कडबेलदेखि लियोन त्रातस्कीसम्म र गोर्कीदेखि ब्रेख्तसम्मका सबै सौन्दर्य चिन्तकहरू अब पत्रु भए। ओजस्वी र तेजस्वी चिन्तक र अन्वेषक राजेन्द्र थापाका अगाडि अभि सुवेदी र निनु चापाई“का त झन् के कुरा गर्नु † मानक भञ्जक राजेन्द्र थापाको सौन्दर्य चिन्तनलाई सरल भाषामा यसरी व्यक्त गर्न सकिन्छ। उनी सेफ्टी ट्यांकमा घोचो घुसारेर हु“डल्छन् र वायुमण्डलभरि पोर्नोग्राफीय सुवास फैलाउ“छन्। उनी यसैलाई यथार्थको प्रस्टाप्रस्टी प्रतिबिम्बन मान्छन्। उनी यसैलाई नवीन युगको मौलिक आख्यान मान्छन्। उनी यसैमा श्लीलता, शालीनता र मर्यादा देख्छन्।
विनयशीलता साथ म स्वीकार गर्छु, हरि अधिकारी, अनमोलमणि, रामेश्वर बोहरा र मजस्ता मृत लेखकहरूका लागि राजेन्द्र थापा एक महान् गुरु हुन्। उनी हाम्रा प्रवोधित दृष्टिदाता हुन्। उनी हाम्रा ज्ञानका अजस्र मुहान हुन्। उनी हाम्रा उदार मार्गदर्शक हुन्। हामी …पत्रकारी साहित्यकार'हरूलाई उनले बिदेशी आख्यान पढ्ने सल्लाह दिएका रहेछन्। निःशुल्क सल्लाह † यस्तो पठनबाट थिम, भाषा र शैलीमा निखार आउ“छ रे। सानो कुवाभन्दा बाहिर ठूलो संसार हुन्छ रे साहित्यको। पाउलो कोइलो भन्ने कतैका कोही लेखक रहेछन्। ती पाउलोले …एलेभेन मिनेट' भन्ने सम्भोग साहित्य रचेका रहेछन्। राजेन्द्रले ज्ञान दान गरेपछि बल्ल मलाई पाउलोबारे थाहा भयो। अहो † बिदेशी आख्यान प्रचूर मात्रामा पढेरै त होला राजेन्द्र थापाको थिम, भाषा र शैलीमा यति सह्रो निखार आएको †
आयो कुरा अब सीके लालको। राजेन्द्र थापाको दिव्य दृष्टिमा सीके लाल कुरै नबुझी प्याच्च बोल्छन् र म मृतक तिनको उक्साहटबाट बहकिन्छु। यो प्रसङ्गको जायजन्म वैरागी काइ“लाले गरेको तुलनाबाट भएको हो। वैरागीले …खेलौना'लाई बीपीका मनोविश्लेषणात्मक आख्यानको हाराहारीमा राखेछन्। यहा“नेर म ब्यंग्य र कटाक्षबाट बाहिर निस्केर तर्क गर्छु। के बीपी पोर्नोग्राफीका लेखक हुन्? होइनन् भने वैरागी दाइ, पोर्नोग्राफीका जण्ड सृष्टिकर्ता राजेन्द्र थापा कसरी बीपीस“ग तुलनीय भए?
नीलो आकाशमुनिका ज्ञानगुनका सबै कुरा बुझेको अभिनय गर्ने बरा राजेन्द्र थापाको व्यंग्यचेत कति कमजोर † ती जे पनि अभिधामा बु‰न खोज्दा रहेछन्। लक्षणा र व्यञ्जनाको बोध र चेत मानौ“ तिनमा शून्य छ † म मृतकले व्यंग्यार्थमा जगदीश घिमिरे र वैरागी काइ“लालाई क्रमशः सेक्सन अफिसर र मुख्य सचिवको संज्ञा दिएको थिए“। र अभि दाइलाई नायब सुब्बा र गोविन्दराज भट्टराईलाई खरिदार। करुणामयी राजेन्द्र थापालाई बडो पीर परेछ— म मृतकका भागमा अब कुन पद पर्ने हो? साहित्यको पियनको? राजेन्द्रको करुणामयी चित्तवृत्तिलाई नमन गर्दै म निवेदन गर्छु— म मृतक साहित्यको पियन भनिन पनि लायक छैन। झुर …पत्रकारी साहित्य' लेख्ने नाथेलाई के को पियन पदवी?
र अन्त्यमा, पोर्नोग्राफीका सबै तत्वहरू ललित साहित्यका विषय हुन सक्छन्। तर परम् दयालु नारीमुक्ति योद्धा राजेन्द्र थापाले जिद्दी गरेझै“ पोर्नोग्राफी स्वतः साहित्य हु“दैन। ललित साहित्यमा पोर्नोग्राफीका तत्वहरू सौन्दर्यको आवरणभित्र लुकेर आउ“छन्। ललित साहित्यको प्रयोजन केवल पाठकगणको स्थूल अभिरुचिलाई तुष्टि दिनु होइन। प्रयोजन त पाठकगणलाई आनन्द प्रदान गर्र्नुको साथसाथै तिनको रुचि परिष्कार र आत्मिक उन्नयन पनि हो। ललित साहित्यमा जीवनका कुरुप पक्षहरूको थप कुरुपीकरण गरि“दैन। बरु ती कुरुप पक्षहरूलाई समेत सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत गरिन्छ। तब न ललित साहित्य † तर कुरुपका संवाहक र प्रसारक राजेन्द्र थापा भने कुरुपको थप कुरुपीकरणमा गौरव गर्छन्। त्यसैले त यिनलाई पोर्नोग्राफीका उस्ताद भनिएको हो †
Posted by Basanta Basnet at 1:30 AM
Prabin Baniya April 20, 2013 at 1:55 AM
Milan Neupane April 20, 2013 at 2:02 AM
खगेन्द्र दाजु नमर्नूस प्लीज vs मर्न देऊ, पोर्नाेग्राफी बचाऊ
Ramro lagyo lekh.